FBC - Kilaboonni Maadriid walakkaa xumuraaf wayita darban Kaamp Nu irratti tapha hawwataatu eegama
Kilaboonni Maadriid walakkaa xumuraaf wayita darban Kaamp Nu irratti tapha hawwataatu eegama
Finfinnee, Ebila 11, 2009 (FBC) Taphoota deebii xumura maayessaa Chaampiyans Liigii kaleessa galgala geggeffamaniiru.
Saantiyaagoo Barnaabaaw irratti Riyaal Maadriid Baayarn Muunikiin akkasumas Kiing Paawar irratti Leesar Siitiin Atleetikoo Maadriidiin keessummeessaniiru.
Taphoota kanaan kilaboonni Magaalaa Maadriid lamaan qabxii ga’anii deebi’uun injifachuun walakkaa xumuraaf darbuusaanii mirkaneessaniiru.
Taphi Riyaal Maadriid Muuniik waliin taphatan irratti Muunikoonni dhiibbaan taphatanii goolii Roobart Leevaandviskiin ‘ligooreen’ boqonnaa booda lakkkoofsiseen 1 fi 0n dursuu danda’anii turani.
Gareen Riyaal Maadriid goolii Roonaaldoon galcheen qixa ta’uu danda’anis daqiiqaawwan lama booda Sarjiyoo Raamoos goolii ofiisaarratti lakkoofsiseen yeroo taphaa idilee Muuniik 2 fi 1n dursee xumurameera.
Taphataan sarara gidduu Muuniik carraalee goolii balleesse Artuuroo Viidaal kaardii kelloo lamaan dirree keessaa ba’eera.
Gara sa’aatii dabalataatti erga seenanii booda dhuma irratti gareen Maadriid goolii Kiristiyaanoo Ronaaldoon galcheen qabxii taphichaa qixa gochuu danda’aniiru.
Daqiiqaa 15 dabalataattis Kiristiytaanoo Ronaaldoon garichaa fi ofiisaaf goolii sadaffaa lakkoofsisuun taphichi 3 fi 2n akka itti fufu carraa uumeera.
Ziinadiin Ziidaaniin carraan kan kennameef taphataan dargaggoo Asaansiyoon ammoo goolii ittiin xumurame dabaluun taphichi 4 fi 2 goolabameera.
Qabxii waliigalaanis Riyaal Maadriid 6 fi 3n injifachuun walakkaa xumuraaf darbeera.
Taphataan jifataa Maadriid Roonaaldoonis Chaampiyans Liigiitti irratti qofa goolota 100 lakkoofsisuun abbaa seenaa wayita ta’u, waltajjii Yuuroop irratti ammo goolii 103ffaa isaa lakkoofsisuu danda’eera.
Tapha galgalaa biraan Kiing paawar irratti kan taphatan Leestar Siitii fi Atleetikoo Maadriid osoo wal hin-injifatin qixa adda ba’aniiru.
Walakkaa jalqabaa taphichaa taphataan Atleetikoo Saawul Nuugeez garichaaf goolii ittiin dursee ture lakkoofsiseera.
Walakkaa lammaataatti Jifataan Leestar Siitii Jiimii Vaardii goolii isaaniin itti qixxeesse lakkoofsisus walakkaa xumuraaf kan isaan dabarsu hin-taane.
Akka qabxii kanaattis Atleetikoo Maadriid tapha ga’anii deebi’uun qabxii 2 fi 1n walakkaa xumuraatti darbeera.
Taphoonni deebii xumura maayessaa taphoota har’a geggeeffamaniin itti fufu.
Kaamp Nu irratti Baarseloonaan Juuveentusiin 3 fi 0n isa injifatame jijjiiiruuf dirree seena.
Xumura torbanichaatti El Kilaasikoon Riyaal Maadriid waliin kan taphatan Gareen Baarseloonaa isa hin-danda’amne fakkaatu kana yaaluuf dirree seenu.
Baarseloonaan tapha moo’anii darbuun PSG 6 fi 1n injifachuun haala hin-eegamneen tapha maayessaaaf darbuunsaanii kan yaadatamudha.
Baay’een garuu Juuveentus kilaba Paariis irraa adda waan ta’eef taphi galgala har’aa kilaba Kaatalaan kanatti nicima jechaa jiru.
Istaad Luwiiz irratti ammo Moonaakoon Garee Jarmanii Boorsiyaa Doortmuund waliin taphatu.
Tapha jalqabaa gareen Moonaakoo 3 fi 2n injifachuunsaanii kan yaadatamudha.
Hogganaan Doortmund Toomaas Tusheel balaa boombii - garee isaanii baasii taphattootaa irra qaqqabee ture - naasuu isaa keessaa osoo hin-ba’in taphachuunsaanii haala akka duraa jeeqe dubbataa turani.
Har’as qabxii gadi aanaa dirree Firaans irratti galmeessisan jijjiiruuf dirree seenu.
Oduuwwan Biroo « Maaraatoona Boostaniin Keeniyaan milkooftetti	Priimiyar liigii Ityoophiyaa har’aatin magaalaan Adaamaa milkaa’era »